China Plastic mativi formwork fekitari uye bhizimisi | Zhongming
Chigadzirwa KutangaKambani yedu yakagadzira chigadzirwa chitsva, pp girazi rakareba fiber rinoumba kuvaka formwork, vachishandisa polypropylene sechinhu chepasi, girazi faibha rakasimbiswa rakasanganiswa zvinhu, uye chakuvhuvhu kudzvanya muzvimiro. Iyo fomati system ine 65 ukobvu hwakajairwa mafomu uye makumi matanhatu neshanu akaumbwa formwork. Inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana dzekubatanidza kumira dzakasiyana siyana dzekuvaka.
Yakachipa mutengo uye yakapusa mashandiro ndiwo makuru mabhenefiti epe refu girazi fiber inosanganiswa zvinhu. Mari yacho inongova 50% yealuminium formwork, huremu hunongova 19kg /, saizi yakajairwa ndeye 1200x600mm, huremu i14kg chete, kuvaka kwacho kuri nyore, disassembly uye gungano rinokurumidza, manpower uye murume-awa vanoponeswa , kuvaka kunogoneswa, uye kumhanya kwekuvaka kunovandudzwa zvinobudirira. Panguva iyoyowo, pp refu girazi internet rinoumba formwork husingakwanisi acid, alkali uye ngura, nyore kuchenesa, upenyu basa refu, uye reuse nguva kanopfuura makumi matanhatu nguva.
Seyakareruka nzira yekugadzira, hapana tsvina inoburitsa marara matatu. Mushure mekusvika pahupenyu hwebasa, inogona kushandiswazve uye ishandiswe seyakagadzirwa nharaunda inoshamisira chigadzirwa. Iyo pp yakareba girazi fiber inosanganiswa zvinhu zvekuvaka formwork, iyo ine zvakanakira simba rakanaka, akapatsanuka akapatsanuka, mapurasitiki akanaka, nekukurumidza kumhanyisa kuvaka, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, zvinofanirwa kuve zvichishandiswa zvakanyanya mumusika wemazuva ano wekuvaka uyo unosimbisa kuvaka kwegirini.
Saizi yekoramu: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm
Waling inogadziriswa renji: 200-600mm
Chiedza chakareruka, chinobatsira. Iyo hombe pani iri 120x60cm, uremu chete 14kg, iyo inogona kusimudza uye kumisikidzwa nemunhu mumwe chete nyore
Nyore set up. Saizi yakakura yemapaneli inogona kuvharwa zvakasimba nepini. Iwo mapaneru ane imbabvu kumusana, izvo zvinoita kuti sisitimu isade kwete echinyakare matanda mabhuru nezvipikiri. Iwo mapaneru ane akaenzana simbi pombi yekusimbisa, inovimbisa simba reyese system.
Simba rakakwirira. Izvo zvinhu zve modular formwork ndeye PP (polypropylene) yakasanganiswa neakasarudzika magirazi faibha, uye yakasimbiswa nesimbi pombi yekukanda mupurasitiki inogonesa mapaneru kubata kumanikidza kwakanyanya. Mumaoko acho anoitwa nepini yesimbi, pani yega yega yakakiyiwa nezvipina zvina, izvo zvinoita kuti sisitimu yese ive nesimba zvakakwana.
Inogona kushanda isina rusvingo kuburikidza netayi tsvimbo. Nekuti yakasimbiswa neyakaenzana simbi pombi, iyo inowedzera zvakanyanya simba rayo. Kana yakatsigirwa ne waling, inogona kushanda isinamadziro kuburikidza netayi tsvimbo.
Zviri nyore kupatsanura nekongiri yapera. Nekuda kweakakosha ekurapwa kwepamusoro, kongiri haina kunamira mafomu, nekudaro mapaneru haadi mafuta asati ashandiswa, uye anogona kucheneswa nemvura chete. Pamusoro pemadziro ayo akavakwa nemafomu edu akatsetseka, anogona kusiiwa asina kugadzirisazve.
Aluminium Fomu Kuvaka
Aluminium Fomati Sisitimu
Aluminum rakanyorwa Formwork System
Modular Aluminium Formwork Maitiro
Ringlock Scaffolding Zvikamu, Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Metal Cuplock Scaffolding,